Chapter -3- BookCubicle
အခန်း- ၃ နှစ်လိုဖွယ်ကောင်းသော စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်စနစ်
ကျောင်းအပ်ပြီးသည့်နောက် အန်လင်းက သူနေထိုင်ရမည့် အဆောင်သို့ ထွက်လာသည်။
အဆောင်သို့ရောက်တော့ နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး ရင်သပ်ရှူမောဖြစ်ရပြန်သည်။
ကိုးပြည်ထောင်မှာ ထိပ်တန်းအဆင့်ရှိတဲ့ ကျင့်ကြံခြင်း ကျောင်းတော်လို့ သတ်မှတ်ခံရတာ မဆန်းပါဘူးလေ။ တကယ်လည်း ထိုက်တန်တာကိုး...။ အကျိုးခံစားခွင့်တွေကလည်း ထိပ်တန်းအဆင့်ပဲ။ ကျောင်းသားအသစ်တိုင်းက ကိုယ်ပိုင်နှစ်ထပ်ဆောင်တစ်ဆောင်စီ ရတာကိုး..။
အဆောက်အဦကို သစ်သားဖြင့် ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ကာ အတွင်းရှိ ပရိဘောဂများမှာလည်း လူတိုင်း လိုအပ်သည်များ ဖြစ်ကြသည်။
သေချာတာပေါ့..။ ကွန်ပျူတာများ၊ ရုပ်မြင်သံကြားစက်များ၊ လေအေးပေးစက်များ၊ အဝတ်လျှော်စက်များနှင့် အခြား အရာအားလုံးကိုပင် မေ့သွားနိုင်လောက်သည်။ ဒီမှာရှိသမျှ ပရိဘောဂအများစုသည် သစ်သားဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်ချည်းသာ။
သူကမ္ဘာပေါ်တွင် ဖတ်ခဲ့ဖူးသည့် ကျင့်ကြံခြင်းအခြေခံ ဝတ္ထုများတွင် ဖော်ပြထားသည့် အချက်အလက်များနှင့် အတော်လေး တူညီမှုရှိသည်ဟု အန်လင်းက ခံစားရသည်။
ခေတ်ပေါ်အသုံးအဆောင်များ မရှိသော်လည်းဘဲ ကျောင်းတော်အတွင်းဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့် အိမ်ဆောင်များတွင် နေရာချထားပေးမှုက အန်လင်းအား အလွန်ပျော်ရွှင်စေသည့် ခံစားချက်ကိုပေးသည်။
အိမ်ဆောင်များကို တန်းခွဲအလိုက် နယ်မြေပိုင်းခြား ခွဲဝေပေးထားခြင်းဖြစ်ကာာ စုရှောင်လန်၏ အိမ်ဆောင်မှာ အန်လင်း၏ ဘေးကပ်ရပ်တွင် ဖြစ်သည်။
ထိုသည်ကို သိလိုက်ရတော့ အန်လင်းမှာ တိတ်တဆိတ် ပျော်မိသွားသည်။ ဆိုရိုးများအရ ရေနှင့်အနီးဆုံးသော ပွဲကြည့်စင်သည် လရောင်ကို ဦးဆုံး ခံစားရသည် မဟုတ်ပါလား။ (ဆိုလိုသည်မှာ ကောင်းမွန်သည့် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ သင့်တော်သည့် အနေအထားတွင် ကျရောက်တတ်သည်။)
ထို့အပြင် စုရှောင်လန်မှာ ကြင်နာတတ်ပြီး အလွန်တရာ လှပသေးသည်။ ဒါတင်မဟုတ် သူမသည် သူ့အားနည်းချက်များကို အပြစ်မပြင်ပေ။ ဒီလိုကောင်းမွန်သည့် အပေါင်းအသင်းမျိုးကို ဘယ်မှာရှာရမတဲ့တုန်း...။
ဟင့်..။ ငါ့မှာ စစ်နတ်ဘုရားစနစ် ရှိတယ်..။ ငါက ကျင့်ကြံခြင်းကမ္ဘာကို စိုးဖိုးဖို့အတွက် ကံတရားက စီရင်ပေးလိုက်တဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ..။
စုရှောင်လန်...။ ငါ့ကိုယ်ငါ သတ်သေပြမယ်..။ ပြီးရင် ငါ့အပေါ်အမြင် ပြောင်းလာစေရမယ်..။
အန်လင်း၏ မျက်လုံးများမှာ ခါးသီးမှုတွေနဲ့ တောက်လောင်နေပြီး သူ့နှလုံးသား အခြေမှနေ မာန်မာနတို့က မြင့်တက်လာသည်။
ငါက တာအိုခန္ဓာ ဗလာအဆင့် ဖြစ်တော့ကော ဘာဖြစ်တုန်း။ ရှောင်ယန် တောင်မှပဲ နတ်ဘုရား ဖြစ်လာခဲ့တာ။ ငါကဘာလို့ အင်မော်တယ်နတ်ဘုရား မဖြစ်နိုင်ရမှာလဲ..။ (ကောင်းကင်ဘုံသို့ စစ်ပြိုင်ခြင်းမှ ရှောင်ယန် ပါ။)
ထိုသည်ကို တွေးမိတော့ အန်လင်း၏ နှုတ်ခမ်းထောင့်စွန်းလေးက အပေါ်ကို ကွေးတက်သွားပြီး ခပ်ပါးပါး ပြုံးလိုက်သည်။ သူ့မျက်နှာတွင်တော့ ယုံကြည်မှု အပြည့်နှင့်ပင်။
အိပ်ယာပေါ်တွင် ထိုင်လိုက်ပြီး သူ့စိတ်အတွင်းရှိ စစ်နတ်ဘုရားစနစ်ကို ဖွင့်ပြီး ကောင်းကင်ကို ဖီဆန်သည့် ကျင့်ကြံခြင်းခရီးကြမ်းကို စတင်လိုက်သည်။
စစ်နတ်ဘုရားစနစ်၏ သွင်ပြင်မှာ ရိုးရှင်းသည်။ 'ကျင့်ကြံခြင်း အခြေခံ'၊ 'ကျင့်ကြံခြင်း နည်းစနစ်' နှင့် 'လှုပ်ရှားမှုများ' ဟူသည့် ကဏ္ဍကြီး သုံးခုနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။
အိုး... 'အထူးစစ်ဆင်ရေး' လို့ နာမည်ပေးထားသည့် ဘာကြီးမှန်းမသိသည့် ကဏ္ဍတစ်ခုလည်း ပါနေသေးသည်။
'ကျင့်ကြံခြင်း နည်းစနစ်'၊ 'လှုပ်ရှားမှုများ' နှင့် 'အထူးစစ်ဆင်ရေး' တို့မှာ မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေပြီး 'ကျင့်ကြံခြင်း နည်းစနစ်' နှင့် 'လှုပ်ရှားမှုများ' သည် တာအိုခန္ဓာ အဆင့် ၇ သို့ ရောက်မှ ဝင်ကြည့်နိုင်မည်ဟု ဖော်ပြထားသည်။
အန်လင်းက စိတ်တိုသွားပြီး 'ကျင့်ကြံခြင်း အခြေခံ' ကို ကြည့်လိုက်သည်။
"တာအိုခန္ဓာ ပထမအဆင့် __ သတ်မှတ်ချက် : ဒိုက် ၁၀ ကြိမ် ထိုးပါ..။ "
"ဘုရားရေ.." အန်လင်းမှာ ပါးစပ်အဟောင်းသား ဖြစ်သွားသည်။ သူ့မျက်နှာတွင် မယုံကြည်နိုင်သော အကြည့်များ ပေါ်လာပြီး "ဒါကိုလုပ်ရင် ပထမအဆင့် ရောက်ပြီးသား ဖြစ်မယ်ပေါ့..?"
အန်လင်းက မယုံသင်္ကာဖြင့် အိပ်ယာပေါ်တွင် ဒိုက် ၁၀ ကြိမ် ထိုးလိုက်သည်။
ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် သူ၏အရိုးများက တဖျစ်ဖျစ်မြည်လာပြီး ကြွက်သားများက ပြင်းပြင်းထန်ထန် နာကျင်လာသည်။
မတ်တပ်ရပ်ဖို့ကိုပင် အချိန်အတော်ကြာ ယူလိုက်ရသည်။ အသက်ရှူ ပြင်းထန်နေကာ ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးတွင်လည်း ချွေးများရွှဲနေသည်။
"ငါ... ငါက သန်မာလာပြီ.." အန်လင်းက သူ့ခန္ဓာကိုယ် ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှန်း သိနေသည်။ ထိုမျှလောက် စွမ်းအင်ပြည့်ဝနေခြင်းမျိုး ယခင်က မကြုံခဲ့ဖူးပါ။
သူက စိတ်စွမ်းအင်ကိုပါ အာရုံခံလာနိုင်ပြီး ကောင်းကင်နှင့် မြေပြင်အကြား စီးဆင်းနေသည့် စိတ်စွမ်းအင်များကို ဆိုလိုသည်။
"ဒါက အရေးပါတဲ့ စွမ်းအင်ဆိုတာလား.. တကယ် အံ့ဩစရာပဲ.."
အန်လင်း သိလိုက်သည်မှာ အခုအချိန်ကစပြီး သူက တရားဝင် ကျင့်ကြံသူတစ်ယောက် ဖြစ်လာပြီ ဆိုသည်ကိုပင်။
အန်လင်းက သူ့ရဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ထိန်းဖို့ ကြိုးစားလိုက်ပြီး စစ်နတ်ဘုရားစနစ်ကို ဆက်ကြည့်လိုက်သည်။
"တာအိုခန္ဓာ ဒုတိယအဆင့် __ သတ်မှတ်ချက် : ၁၀ ကို ၁၀ ပေါင်းပြီး ဒိုက်ထိုးပါ..။"
"ဒါက... တကယ်ကြီး ရယ်စရာကောင်းနေတယ် မဟုတ်လား.." ထိုသို့ပြောပြီးသည်နှင့် အန်လင်းက သူ့ကိုယ်သူ မထိန်းနိုင်တော့ဘဲ ရယ်မောလိုက်သည်။
ခွီး... ဒီပုံစံအတိုင်းဆို မနက်ဖြန်ရောက်ရင် ငါက ကျောင်းတော်ရဲ့ ထိပ်တန်းကျောင်းသား ဖြစ်နေတော့မှာပဲ..။
အန်လင်းက အပေါ်စီးမှ ခြယ်လှယ်နေသည့်ပုံကို တွေးလိုက်ပြီး တစ်ချက်ရယ်လိုက်သည်။
အကြိမ် ၂၀ ဒိုက်ထိုးပြီးသည့်နောက် ချွေးများ ရွှဲရွှဲစိုနေပြီဖြစ်သည်။ သူက နောက်တစ်ကြိမ် ပိုသန်မာလာတာကို ခံစားမိနေသည်။
သူက ညာလက်သီးကို ဆုပ်ကာ အနီးရှိ စားပွဲခုံကို ရုတ်တရက် ထိုးခွဲလိုက်သည်။ သူ့လက်သီးချက်ကြောင့် စားပွဲမှာ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် အစိတ်စိတ်အပိုင်းပိုင်း ကွဲကြေသွားသည်။
"ဘွားဟားဟားဟား.. ငါမရှုံးနိမ့်တော့ဘူးကွ.. ဒါကို စစ်နတ်ဘုရားစနစ်လို့ အကြောင်းမရှိဘဲ ခေါ်မှာ မဟုတ်ဘူး.. သောက်ရမ်းချစ်တယ်ကွာ..." အန်လင်းက အော်ဟစ်ပြီး ရယ်မောနေပါသည်။
စနစ်ကို ဆက်ကြည့်လိုက်ပြီးနောက်တွင် သတ်မှတ်ချက်မှာ ပြောင်းလဲသွားသည်ကို တွေ့လိုက်ရသည်။ "တာအိုခန္ဓာ တတိယအဆင့် __ သတ်မှတ်ချက် : ၁၀ ကို ၁၀ နှင့် မြှောက်ပြီး ဒိုက်ထိုးပါ..။"
ဟိဟိဟိ.. နည်းနည်းလေး ပိုခက်လာပြီ..။
ဒိုက်ထိုးပြီးသွားတော့ အန်လင်းက အပြုံးအကြီးကြီး ချိတ်ဆွဲထားလိုက်သည်။
အကြိမ် ၁၀၀ ကို မရပ်မနား ဒိုက်ထိုးပြီးသည်နောက် သူ၏ တာအိုခန္ဓာမှာ တတိယအဆင့်သို့ တိုးတက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
ဟာ.. လူလိမ်စနစ်ပဲ ဟ..။ တခြားသူတွေသာ ဒီလိုနည်းနဲ့ ငါ့ တာအိုခန္ဓာ အဆင့်မြင့်လာတာ သိကြည့်ပါလား ရူးတောင်သွားဦးမယ်..။
အန်လင်းမှာ တစ်ခဏချင်းပင် ဘဝကြီး၏ အထွဋ်အထိပ်သို့ ရောက်ရှိနေသည်ဟု ခံစားနေရပြီး စနစ်၏ သွင်ပြင်ကို ပေါ့ပေါ့တန်တန်ပင် ဖွင့်လိုက်သည်။ နောက်တစ်ဆင့်သို့ ရောက်ရှိရန် လိုအပ်ချက်မှာလည်း ဒိုက်ထိုးရုံပင် ဖြစ်ကြောင်း မြင်လိုက်သည့်အခါ ပျော်ရွှင်စွာဖြင့် ထခုန်တော့သည်။
"တာအိုခန္ဓာ စတုတ္ထအဆင့် __ သတ်မှတ်ချက် : ၁၀ ကို ထပ်ကိန်း ၁၀ တင်ပြီး ဒိုက်ထိုးပါ..။"
၁၀ ကို ထပ်ကိန်း ၁၀ တင်ပြီး ဒိုက်ထိုးရမယ်..?
အန်လင်းက ၁၀ စက္ကန့်လောက် တွေဝေသွားသည်။
ခဏလေး ခဏလေး.. တွက်ကြည့်မယ်နော်.. ၁၀ ကို ၁၀ ထပ်တင်ပြီး ဒိုက်ထိုးတာက ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့...
၁၀ ကို ၁၀ ထပ် တင်တာက ၁၀ ဘီလျံ.. အဲတော့ ၁၀ ဘီလျံ ဒိုက်ထိုးရမယ်ပေါ့..
ငါက ပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ နေ့တိုင်း တစ်နေ့ကို အကြိမ် ၁ သိန်း လုပ်တာတောင်မှ ဘယ်လောက်ကြာမလဲဆိုတော့.. ဘုရားရေ... နှစ်ပေါင်း ၂၇၀ ကျော်မှ ပြီးမှာပါလား..။
"ဒါက........." အန်လင်းမှာ ကုတင်ပေါ်တွင် အံ့အားသင့်စွာ ထိုင်နေပြီး သူ့မျက်လုံးများမှာလည်း ဗလာဖြစ်နေသည်။ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရေစုန်မျောသွားပြီ ဖြစ်သည်။
သူက စစ်နတ်ဘုရားစနစ်ကို ဖွင့်လိုက်တော့ 'ကျင့်ကြံခြင်း အခြေခံ' ကဏ္ဍကလွဲ တခြားကဏ္ဍများမှာ မီးခိုးရောင်သာလျှင် ရှိနေသေးသည်။
အဲတော့ ငါက နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်လောက် နေ့တိုင်း ဒိုက်ထိုးပြီး အဆင့်မြှင့်တင်ရမယ်ပေါ့..။
မဟုတ်ဘူး..။ ပိုပြီးအရေးကြီးတာက ငါက နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ လောက် အသက်မရှည်နိုင်ဘူးလေ..။
အန်လင်း၏ မျက်လုံးတွင် မျက်ရည်များ ဝေ့သီလာသည်။ ဘယ်လိုသောက်ကျိုးနည်း စနစ်မျိုးလဲကွာ.. ဒီကောင်က ငါ့ကို စိတ်ဓာတ်ကျစေချင်နေတာလား..။
အန်လင်းက နှလုံးသားတွေ ကွဲကြေနေသကဲ့သို့ ဖြစ်လာပြီးနောက် ရုတ်တရက် တစ်ခုခုကို တွေးလိုက်မိသည်။
မဟုတ်ဘူး.. ငါက ကျင့်ကြံဖို့အတွက် စနစ်ကိုပဲ အားကိုးနေစရာမှ မလိုတာ.. ငါ့ဘာငါ ကျင့်ကြံနိုင်တာပဲကို..။
အန်လင်းက ထိုသောက်ရေးမပါသည့် စနစ်ကြောင့် ကြောက်လန့်နေခဲ့ပြီး နောက်တွင်မှ အသိပြန်ဝင်လာခဲ့သည်။ သူ့အဆင့် တိုးလာသည့် အခါတိုင်း စနစ်၏ အခြေအနေမှာလည်း ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သူ့ကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်မည် ဆိုပါကလည်း စနစ်၏ အနေအထားမှာ ပြောင်းလဲလာမည်သာ ဖြစ်သည်။ အခြေအနေတွေက ပိုလိုပင် လွယ်ကူကောင်း လွယ်ကူလာနိုင်သေးသည်။
ဒါက ဒီစနစ်ရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ ဒါမှမဟုတ် အသုံးပြုပုံ ဖြစ်နိုင်တယ်..။ အန်လင်းက သူ့အတွေးများအပေါ် ယုံကြည်ချက် အပြည့်နှင့်ပင်။
သို့ပေမဲ့လည်း ပြဿနာအသစ်က ပေါ်လာပြန်သည်။ သူ့ဘာသာ ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမည်နည်း..။
ဒေါက် ဒေါက် ဒေါက်
အန်လင်းက သစ်သားတံခါးကို ခေါက်နေရင်း အတော်လေး စိတ်မသက်မသာ ဖြစ်မိသည်။ တံခါးဖွင့်လိုက်သည်နှင့် ကျက်သရေရှိလှသည့် ပုံရိပ်လေးက အန်လင်းအမြင်အာရုံထဲ ပေါ်လာသည်။ ပိတုန်းရောင်ဆံနွယ်ရှည်တွေက မိန်းကလေး၏ ပုခုံးမှ ဝဲကျနေပြီး အနည်းငယ် စိုစွတ်နေသဖြင့် သူမက ယခုလေးတင် ရေချိုးသန့်စင်ပြီးပုံပေါ်သည်။ တံခါးဖွင့်လိုက်သည်နှင့် အန်လင်းက ချိုမြိန်သင်းပျံ့သည့် ရနံ့လေးကို ရှူရှိုက်လိုက်မိသည်။
"အန်လင်း.. နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ.." ထိုမိန်းကလေးက ယခုအချိန်ကြီး အန်လင်းရောက်လာလိမ့်မည်ဟု မမျှော်လင့်ထားသဖြင့် သူမ၏ လေသံမှာ အံ့အားတကြီး ဖြစ်နေသည်။
"အမ်... စုရှောင်လန်... နောက်ကျမှ နင့်ကို အနှောင့်အယှက်ပေးရတာ တောင်းပန်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ငါ့မှာ အရမ်း အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စလေး ရှိနေလို့ နင်နဲ့ ဆွေးနွေးချင်လို့ပါ.." အန်လင်းက စိတ်ကသိကအောက်ဖြင့် ပြောလိုက်သည်။
"အိုး... ဘာများလဲ.. သီးသန့်ပြောရမယ့် ကိစ္စလား.. အဲတော့ ငါ့အခန်းထဲကို ဝင်လာပြီး လျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက်ပြောဖို့ လိုအပ်တာလား.." စုရှောင်လန်က အန်လင်းကို သူမရဲ့ စူးရှထက်မြက်တဲ့ မျက်လုံးဖျားဖြင့် မျှော်လင့်တကြီး ကြည့်လိုက်သည်။ သူပြောသည့် 'အရေးကြီးကိစ္စ' ဆိုသည်ကို သူမက အရမ်းစိတ်ဝင်စားနေပြီ ဖြစ်သည်။
"မ... မဟုတ်ဘူး.. ငါအဆင်ပြေပါတယ်.." အန်လင်းက သူ့လက်တွေကို ယမ်းခါလိုက်ပြီး သူမရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုကို ငြင်းပယ်လိုက်သည်။
ထိုခဏတွင်ပင် အန်လင်းက နောင်တရမိသည်။ ဘယ်လိုအပြုအမူမျိုးကို လုပ်လိုက်မိတာလဲ..။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်၏ သူမအခန်းထဲသို့ ဖော်ရွေစွာ ဖိတ်ခေါ်မှုကို သူက အမှန်တကယ် ငြင်းဆိုလိုက်တာလား..။
"အာ..." အန်လင်းက သက်ပြင်းချလိုက်မိသည်။
"ဘာဖြစ်တာလား.." ရုတ်တရက်ကြီး စိတ်ဓါတ်ကျသွားသည့် အန်လင်းကို မြင်လိုက်ရတော့ စုရှောင်လန်က ထိုမနက်ခင်းတွင် ကျင်းပခဲ့သည့် စစ်ဆေးမှုကို သတိရလိုက်မိသည်။
ထိုသည်က အန်လင်းအပေါ် သူမ၏ သနားကြင်နာမှုကို တိုးပွားလာစေသည်။ "ဝင်လာခဲ့ပြီး ငါ့ကို သေချာရှင်းပြလေ.. ငါတတ်နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပြီး ကူညီမှာပေါ့.."
"အာ.. ဟုတ်ပြီ.." အန်လင်းက အဖိုးတန်အခွင့်အရေးကို လက်လွှတ်လိုက်မိသဖြင့် စိတ်ဓါတ်ကျနေချိန်တွင် မမျှော်လင့်ဘဲ စုရှောင်လန်က အခွင့်အရေးတစ်ရပ် ပေးလာခဲ့ပြန်သည်။
ဒီတစ်ကြိမ်တွင်တော့ သူက စက္ကန့်ဝက်မျှ စဉ်းစားပြီးနောက် အလျင်အမြန်ပဲ လက်ခံလိုက်သည်။ သူမအခန်းထဲ ရောက်ပြီးနောက် စုရှောင်လန်က အန်လင်းကို ရေနွေးကြမ်းဖြင့် ဧည့်ခံသည်။
အန်လင်းက လက်ဖက်ခြောက်အမည်ကို မသိပေမဲ့လည်း ထိုရနံ့က သူ့အား အတော်လေး သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်စေသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်က စားပွဲ၏ တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ထိုင်လိုက်ပြီး ရေနွေးကြမ်းသောက်ကာ စကားစမြည် ပြောကြသည်။
"ကောင်းပြီ.. နင့်ရဲ့ အရေးကြီးကိစ္စဆိုတာကို အခုပြောလို့ရပြီ.." စုရှောင်လန်က သူမ၏ ကျော့မော့သော ကိုယ်နေဟန်ဖြင့် ရေနွေးကြမ်းပန်းကန်လုံးကို ယူကာ ပတ္တမြားရောင်နှုတ်ခမ်းလေးနှင့် ထိကပ်ပြီး တစ်ငုံယူလိုက်သည်။
"အာ... အာာ.." အန်လင်းက စုရှောင်လန်ကို ကြည့်ပြီးနောက် လေးလေးနက်နက်ဖြင့် ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်သည်။
နေမထိ ထိုင်မထိသည့် အနေအထားက စုရှောင်လန်အား ပိုလို့ အာရုံစိုက်မိစေသည်။
"ငါ့မှာ အဓိက အတားအဆီး တစ်ခုရှိနေတယ်.."
စုရှောင်လန်က ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်ပြီး ဆက်ပြောဆိုသည့် အမူအရာ ပြလိုက်သည်။
"ပြဿနာက... ငါက ဘယ်လိုကျင့်ကြံရမယ်ဆိုတာကို မသိတာပဲ.. နင်ငါ့ကို သင်ပေးနိုင်မလား.."
"ဖူးးး" စုရှောင်လန်က ရေနွေးသီးသွားသဖြင့် အန်လင်း၏ မျက်နှာပေါ်သို့ ထွေးထုတ်မိလျက်သား ဖြစ်သွားသည်။
အခနျး- ၃ နှဈလိုဖှယျကောငျးသော စကျဆုပျရှံရှာဖှယျစနဈ
ကြောငျးအပျပွီးသည့ျနောကျ အနျလငျးက သူနထေိုငျရမည့ျ အဆောငျသို့ ထှကျလာသညျ။
အဆောငျသို့ရောကျတော့ နောကျတဈကွိမျထပျပွီး ရငျသပျရှူမောဖွဈရပွနျသညျ။
ကိုးပွညျထောငျမှာ ထိပျတနျးအဆင့ျရှိတဲ့ ကငြ့ျကွံခွငျး ကြောငျးတောျလို့ သတျမှတျခံရတာ မဆနျးပါဘူးလေ။ တကယျလညျး ထိုကျတနျတာကိုး...။ အကြိုးခံစားခှင့ျတှကေလညျး ထိပျတနျးအဆင့ျပဲ။ ကြောငျးသားအသဈတိုငျးက ကိုယျပိုငျနှဈထပျဆောငျတဈဆောငျစီ ရတာကိုး..။
အဆောကျအဦကို သဈသားဖွင့ျ ဆောကျလုပျထားခွငျးဖွဈကာ အတှငျးရှိ ပရိဘောဂမြားမှာလညျး လူတိုငျး လိုအပျသညျမြား ဖွဈကွသညျ။
သခြောတာပေါ့..။ ကှနျပြူတာမြား၊ ရုပျမွငျသံကွားစကျမြား၊ လအေေးပေးစကျမြား၊ အဝတျလြှောျစကျမြားနှင့ျ အခွား အရာအားလုံးကိုပငျ မေ့သှားနိုငျလောကျသညျ။ ဒီမှာရှိသမြှ ပရိဘောဂအမြားစုသညျ သဈသားဖွင့ျ ပွုလုပျထားသညျခညြျးသာ။
သူကမ်ဘာပေါျတှငျ ဖတျခဲ့ဖူးသည့ျ ကငြ့ျကွံခွငျးအခွခေံ ဝတ်ထုမြားတှငျ ဖောျပွထားသည့ျ အခကြျအလကျမြားနှင့ျ အတောျလေး တူညီမှုရှိသညျဟု အနျလငျးက ခံစားရသညျ။
ခတျေပေါျအသုံးအဆောငျမြား မရှိသောျလညျးဘဲ ကြောငျးတောျအတှငျးဝငျရောကျပွီးသညျနှင့ျ အိမျဆောငျမြားတှငျ နရောခထြားပေးမှုက အနျလငျးအား အလှနျပြောျရှှငျစသေည့ျ ခံစားခကြျကိုပေးသညျ။
အိမျဆောငျမြားကို တနျးခှဲအလိုကျ နယျမွပေိုငျးခွား ခှဲဝပေေးထားခွငျးဖွဈကာာ စုရှောငျလနျ၏ အိမျဆောငျမှာ အနျလငျး၏ ဘေးကပျရပျတှငျ ဖွဈသညျ။
ထိုသညျကို သိလိုကျရတော့ အနျလငျးမှာ တိတျတဆိတျ ပြောျမိသှားသညျ။ ဆိုရိုးမြားအရ ရနှေင့ျအနီးဆုံးသော ပှဲကွည့ျစငျသညျ လရောငျကို ဦးဆုံး ခံစားရသညျ မဟုတျပါလား။ (ဆိုလိုသညျမှာ ကောငျးမှနျသည့ျ အကြိုးကြေးဇူးမြားမှာ သင့ျတောျသည့ျ အနအေထားတှငျ ကရြောကျတတျသညျ။)
ထို့အပွငျ စုရှောငျလနျမှာ ကွငျနာတတျပွီး အလှနျတရာ လှပသေးသညျ။ ဒါတငျမဟုတျ သူမသညျ သူ့အားနညျးခကြျမြားကို အပွဈမပွငျပေ။ ဒီလိုကောငျးမှနျသည့ျ အပေါငျးအသငျးမြိုးကို ဘယျမှာရှာရမတဲ့တုနျး...။
ဟင့ျ..။ ငါ့မှာ စဈနတျဘုရားစနဈ ရှိတယျ..။ ငါက ကငြ့ျကွံခွငျးကမ်ဘာကို စိုးဖိုးဖို့အတှကျ ကံတရားက စီရငျပေးလိုကျတဲ့ သူတဈယောကျပဲ..။
စုရှောငျလနျ...။ ငါ့ကိုယျငါ သတျသပွေမယျ..။ ပွီးရငျ ငါ့အပေါျအမွငျ ပွောငျးလာစရေမယျ..။
အနျလငျး၏ မကြျလုံးမြားမှာ ခါးသီးမှုတှနေဲ့ တောကျလောငျနပွေီး သူ့နှလုံးသား အခွမှေနေ မာနျမာနတို့က မွင့ျတကျလာသညျ။
ငါက တာအိုခန်ဓာ ဗလာအဆင့ျ ဖွဈတော့ကော ဘာဖွဈတုနျး။ ရှောငျယနျ တောငျမှပဲ နတျဘုရား ဖွဈလာခဲ့တာ။ ငါကဘာလို့ အငျမောျတယျနတျဘုရား မဖွဈနိုငျရမှာလဲ..။ (ကောငျးကငျဘုံသို့ စဈပွိုငျခွငျးမှ ရှောငျယနျ ပါ။)
ထိုသညျကို တှေးမိတော့ အနျလငျး၏ နှုတျခမျးထောင့ျစှနျးလေးက အပေါျကို ကှေးတကျသှားပွီး ခပျပါးပါး ပွုံးလိုကျသညျ။ သူ့မကြျနှာတှငျတော့ ယုံကွညျမှု အပွည့ျနှင့ျပငျ။
အိပျယာပေါျတှငျ ထိုငျလိုကျပွီး သူ့စိတျအတှငျးရှိ စဈနတျဘုရားစနဈကို ဖှင့ျပွီး ကောငျးကငျကို ဖီဆနျသည့ျ ကငြ့ျကွံခွငျးခရီးကွမျးကို စတငျလိုကျသညျ။
စဈနတျဘုရားစနဈ၏ သှငျပွငျမှာ ရိုးရှငျးသညျ။ 'ကငြ့ျကွံခွငျး အခွခေံ'၊ 'ကငြ့ျကွံခွငျး နညျးစနဈ' နှင့ျ 'လှုပျရှားမှုမြား' ဟူသည့ျ ကဏ်ဍကွီး သုံးခုနှင့ျ ဖှဲ့စညျးထားသညျ။
အိုး... 'အထူးစဈဆငျရေး' လို့ နာမညျပေးထားသည့ျ ဘာကွီးမှနျးမသိသည့ျ ကဏ်ဍတဈခုလညျး ပါနသေေးသညျ။
'ကငြ့ျကွံခွငျး နညျးစနဈ'၊ 'လှုပျရှားမှုမြား' နှင့ျ 'အထူးစဈဆငျရေး' တို့မှာ မီးခိုးရောငျဖွဈနပွေီး 'ကငြ့ျကွံခွငျး နညျးစနဈ' နှင့ျ 'လှုပျရှားမှုမြား' သညျ တာအိုခန်ဓာ အဆင့ျ ၇ သို့ ရောကျမှ ဝငျကွည့ျနိုငျမညျဟု ဖောျပွထားသညျ။
အနျလငျးက စိတျတိုသှားပွီး 'ကငြ့ျကွံခွငျး အခွခေံ' ကို ကွည့ျလိုကျသညျ။
"တာအိုခန်ဓာ ပထမအဆင့ျ __ သတျမှတျခကြျ : ဒိုကျ ၁၀ ကွိမျ ထိုးပါ..။ "
"ဘုရားရေ.." အနျလငျးမှာ ပါးစပျအဟောငျးသား ဖွဈသှားသညျ။ သူ့မကြျနှာတှငျ မယုံကွညျနိုငျသော အကွည့ျမြား ပေါျလာပွီး "ဒါကိုလုပျရငျ ပထမအဆင့ျ ရောကျပွီးသား ဖွဈမယျပေါ့..?"
အနျလငျးက မယုံသငျ်ကာဖွင့ျ အိပျယာပေါျတှငျ ဒိုကျ ၁၀ ကွိမျ ထိုးလိုကျသညျ။
ခကြျခငြျးဆိုသလိုပငျ သူ၏အရိုးမြားက တဖစြျဖစြျမွညျလာပွီး ကွှကျသားမြားက ပွငျးပွငျးထနျထနျ နာကငြျလာသညျ။
မတျတပျရပျဖို့ကိုပငျ အခြိနျအတောျကွာ ယူလိုကျရသညျ။ အသကျရှူ ပွငျးထနျနကော ခန်ဓာကိုယျ တဈခုလုံးတှငျလညျး ခြှေးမြားရှှဲနသေညျ။
"ငါ... ငါက သနျမာလာပွီ.." အနျလငျးက သူ့ခန်ဓာကိုယျ ပွောငျးလဲခွငျးနှင့ျ ကွုံတှေ့ခဲ့ရမှနျး သိနသေညျ။ ထိုမြှလောကျ စှမျးအငျပွည့ျဝနခွေငျးမြိုး ယခငျက မကွုံခဲ့ဖူးပါ။
သူက စိတျစှမျးအငျကိုပါ အာရုံခံလာနိုငျပွီး ကောငျးကငျနှင့ျ မွပွေငျအကွား စီးဆငျးနသေည့ျ စိတျစှမျးအငျမြားကို ဆိုလိုသညျ။
"ဒါက အရေးပါတဲ့ စှမျးအငျဆိုတာလား.. တကယျ အံ့ဩစရာပဲ.."
အနျလငျး သိလိုကျသညျမှာ အခုအခြိနျကစပွီး သူက တရားဝငျ ကငြ့ျကွံသူတဈယောကျ ဖွဈလာပွီ ဆိုသညျကိုပငျ။
အနျလငျးက သူ့ရဲ့ စိတျလှုပျရှားမှုကို ထိနျးဖို့ ကွိုးစားလိုကျပွီး စဈနတျဘုရားစနဈကို ဆကျကွည့ျလိုကျသညျ။
"တာအိုခန်ဓာ ဒုတိယအဆင့ျ __ သတျမှတျခကြျ : ၁၀ ကို ၁၀ ပေါငျးပွီး ဒိုကျထိုးပါ..။"
"ဒါက... တကယျကွီး ရယျစရာကောငျးနတေယျ မဟုတျလား.." ထိုသို့ပွောပွီးသညျနှင့ျ အနျလငျးက သူ့ကိုယျသူ မထိနျးနိုငျတော့ဘဲ ရယျမောလိုကျသညျ။
ခှီး... ဒီပုံစံအတိုငျးဆို မနကျဖွနျရောကျရငျ ငါက ကြောငျးတောျရဲ့ ထိပျတနျးကြောငျးသား ဖွဈနတေော့မှာပဲ..။
အနျလငျးက အပေါျစီးမှ ခွယျလှယျနသေည့ျပုံကို တှေးလိုကျပွီး တဈခကြျရယျလိုကျသညျ။
အကွိမျ ၂၀ ဒိုကျထိုးပွီးသည့ျနောကျ ခြှေးမြား ရှှဲရှှဲစိုနပွေီဖွဈသညျ။ သူက နောကျတဈကွိမျ ပိုသနျမာလာတာကို ခံစားမိနသေညျ။
သူက ညာလကျသီးကို ဆုပျကာ အနီးရှိ စားပှဲခုံကို ရုတျတရကျ ထိုးခှဲလိုကျသညျ။ သူ့လကျသီးခကြျကွောင့ျ စားပှဲမှာ ခကြျခငြျးဆိုသလိုပငျ အစိတျစိတျအပိုငျးပိုငျး ကှဲကွသှေားသညျ။
"ဘှားဟားဟားဟား.. ငါမရှုံးနိမ့ျတော့ဘူးကှ.. ဒါကို စဈနတျဘုရားစနဈလို့ အကွောငျးမရှိဘဲ ခေါျမှာ မဟုတျဘူး.. သောကျရမျးခစြျတယျကှာ..." အနျလငျးက အောျဟဈပွီး ရယျမောနပေါသညျ။
စနဈကို ဆကျကွည့ျလိုကျပွီးနောကျတှငျ သတျမှတျခကြျမှာ ပွောငျးလဲသှားသညျကို တှေ့လိုကျရသညျ။ "တာအိုခန်ဓာ တတိယအဆင့ျ __ သတျမှတျခကြျ : ၁၀ ကို ၁၀ နှင့ျ မွှောကျပွီး ဒိုကျထိုးပါ..။"
ဟိဟိဟိ.. နညျးနညျးလေး ပိုခကျလာပွီ..။
ဒိုကျထိုးပွီးသှားတော့ အနျလငျးက အပွုံးအကွီးကွီး ခြိတျဆှဲထားလိုကျသညျ။
အကွိမျ ၁၀၀ ကို မရပျမနား ဒိုကျထိုးပွီးသညျနောကျ သူ၏ တာအိုခန်ဓာမှာ တတိယအဆင့ျသို့ တိုးတကျသှားပွီ ဖွဈသညျ။
ဟာ.. လူလိမျစနဈပဲ ဟ..။ တခွားသူတှသော ဒီလိုနညျးနဲ့ ငါ့ တာအိုခန်ဓာ အဆင့ျမွင့ျလာတာ သိကွည့ျပါလား ရူးတောငျသှားဦးမယျ..။
အနျလငျးမှာ တဈခဏခငြျးပငျ ဘဝကွီး၏ အထှဋျအထိပျသို့ ရောကျရှိနသေညျဟု ခံစားနရေပွီး စနဈ၏ သှငျပွငျကို ပေါ့ပေါ့တနျတနျပငျ ဖှင့ျလိုကျသညျ။ နောကျတဈဆင့ျသို့ ရောကျရှိရနျ လိုအပျခကြျမှာလညျး ဒိုကျထိုးရုံပငျ ဖွဈကွောငျး မွငျလိုကျသည့ျအခါ ပြောျရှှငျစှာဖွင့ျ ထခုနျတော့သညျ။
"တာအိုခန်ဓာ စတုတ်ထအဆင့ျ __ သတျမှတျခကြျ : ၁၀ ကို ထပျကိနျး ၁၀ တငျပွီး ဒိုကျထိုးပါ..။"
၁၀ ကို ထပျကိနျး ၁၀ တငျပွီး ဒိုကျထိုးရမယျ..?
အနျလငျးက ၁၀ စက်ကန့ျလောကျ တှဝေသှေားသညျ။
ခဏလေး ခဏလေး.. တှကျကွည့ျမယျနောျ.. ၁၀ ကို ၁၀ ထပျတငျပွီး ဒိုကျထိုးတာက ဘယျလောကျလဲဆိုတော့...
၁၀ ကို ၁၀ ထပျ တငျတာက ၁၀ ဘီလြံ.. အဲတော့ ၁၀ ဘီလြံ ဒိုကျထိုးရမယျပေါ့..
ငါက ပွငျးပွငျးထနျထနျနဲ့ နေ့တိုငျး တဈနေ့ကို အကွိမျ ၁ သိနျး လုပျတာတောငျမှ ဘယျလောကျကွာမလဲဆိုတော့.. ဘုရားရေ... နှဈပေါငျး ၂၇၀ ကြောျမှ ပွီးမှာပါလား..။
"ဒါက........." အနျလငျးမှာ ကုတငျပေါျတှငျ အံ့အားသင့ျစှာ ထိုငျနပွေီး သူ့မကြျလုံးမြားမှာလညျး ဗလာဖွဈနသေညျ။ မြှောျလင့ျခကြျတှေ ရစေုနျမြောသှားပွီ ဖွဈသညျ။
သူက စဈနတျဘုရားစနဈကို ဖှင့ျလိုကျတော့ 'ကငြ့ျကွံခွငျး အခွခေံ' ကဏ်ဍကလှဲ တခွားကဏ်ဍမြားမှာ မီးခိုးရောငျသာလြှငျ ရှိနသေေးသညျ။
အဲတော့ ငါက နှဈပေါငျး ၂၀၀ ကြောျလောကျ နေ့တိုငျး ဒိုကျထိုးပွီး အဆင့ျမွှင့ျတငျရမယျပေါ့..။
မဟုတျဘူး..။ ပိုပွီးအရေးကွီးတာက ငါက နှဈပေါငျး ၂၀၀ လောကျ အသကျမရှညျနိုငျဘူးလေ..။
အနျလငျး၏ မကြျလုံးတှငျ မကြျရညျမြား ဝေ့သီလာသညျ။ ဘယျလိုသောကျကြိုးနညျး စနဈမြိုးလဲကှာ.. ဒီကောငျက ငါ့ကို စိတျဓာတျကစြခေငြျနတောလား..။
အနျလငျးက နှလုံးသားတှေ ကှဲကွနေသေကဲ့သို့ ဖွဈလာပွီးနောကျ ရုတျတရကျ တဈခုခုကို တှေးလိုကျမိသညျ။
မဟုတျဘူး.. ငါက ကငြ့ျကွံဖို့အတှကျ စနဈကိုပဲ အားကိုးနစေရာမှ မလိုတာ.. ငါ့ဘာငါ ကငြ့ျကွံနိုငျတာပဲကို..။
အနျလငျးက ထိုသောကျရေးမပါသည့ျ စနဈကွောင့ျ ကွောကျလန့ျနခေဲ့ပွီး နောကျတှငျမှ အသိပွနျဝငျလာခဲ့သညျ။ သူ့အဆင့ျ တိုးလာသည့ျ အခါတိုငျး စနဈ၏ အခွအေနမှောလညျး ပွောငျးလဲလာခဲ့သညျ။ ဆိုလိုသညျမှာ သူ့ကိုယျပိုငျအစှမျးအစနှင့ျ အဆင့ျမွှင့ျတငျမညျ ဆိုပါကလညျး စနဈ၏ အနအေထားမှာ ပွောငျးလဲလာမညျသာ ဖွဈသညျ။ အခွအေနတှေကေ ပိုလိုပငျ လှယျကူကောငျး လှယျကူလာနိုငျသေးသညျ။
ဒါက ဒီစနဈရဲ့ အလုပျလုပျပုံ ဒါမှမဟုတျ အသုံးပွုပုံ ဖွဈနိုငျတယျ..။ အနျလငျးက သူ့အတှေးမြားအပေါျ ယုံကွညျခကြျ အပွည့ျနှင့ျပငျ။
သို့ပမေဲ့လညျး ပွူနာအသဈက ပေါျလာပွနျသညျ။ သူ့ဘာသာ ဘယျလိုကငြ့ျကွံရမညျနညျး..။
ဒေါကျ ဒေါကျ ဒေါကျ
အနျလငျးက သဈသားတံခါးကို ခေါကျနရေငျး အတောျလေး စိတျမသကျမသာ ဖွဈမိသညျ။ တံခါးဖှင့ျလိုကျသညျနှင့ျ ကကြျသရရှေိလှသည့ျ ပုံရိပျလေးက အနျလငျးအမွငျအာရုံထဲ ပေါျလာသညျ။ ပိတုနျးရောငျဆံနှယျရှညျတှကေ မိနျးကလေး၏ ပုခုံးမှ ဝဲကနြပွေီး အနညျးငယျ စိုစှတျနသေဖွင့ျ သူမက ယခုလေးတငျ ရခြေိုးသန့ျစငျပွီးပုံပေါျသညျ။ တံခါးဖှင့ျလိုကျသညျနှင့ျ အနျလငျးက ခြိုမွိနျသငျးပြံ့သည့ျ ရနံ့လေးကို ရှူရှိုကျလိုကျမိသညျ။
"အနျလငျး.. နငျဘာလာလုပျတာလဲ.." ထိုမိနျးကလေးက ယခုအခြိနျကွီး အနျလငျးရောကျလာလိမ့ျမညျဟု မမြှောျလင့ျထားသဖွင့ျ သူမ၏ လသေံမှာ အံ့အားတကွီး ဖွဈနသေညျ။
"အမျ... စုရှောငျလနျ... နောကျကမြှ နင့ျကို အနှောင့ျအယှကျပေးရတာ တောငျးပနျပါတယျ.. ဒါပမေဲ့ ငါ့မှာ အရမျး အရေးကွီးတဲ့ ကိစ်စလေး ရှိနလေို့ နငျနဲ့ ဆှေးနှေးခငြျလို့ပါ.." အနျလငျးက စိတျကသိကအောကျဖွင့ျ ပွောလိုကျသညျ။
"အိုး... ဘာမြားလဲ.. သီးသန့ျပွောရမယ့ျ ကိစ်စလား.. အဲတော့ ငါ့အခနျးထဲကို ဝငျလာပွီး လြှို့လြှို့ဝှကျဝှကျပွောဖို့ လိုအပျတာလား.." စုရှောငျလနျက အနျလငျးကို သူမရဲ့ စူးရှထကျမွကျတဲ့ မကြျလုံးဖြားဖွင့ျ မြှောျလင့ျတကွီး ကွည့ျလိုကျသညျ။ သူပွောသည့ျ 'အရေးကွီးကိစ်စ' ဆိုသညျကို သူမက အရမျးစိတျဝငျစားနပွေီ ဖွဈသညျ။
"မ... မဟုတျဘူး.. ငါအဆငျပွပေါတယျ.." အနျလငျးက သူ့လကျတှကေို ယမျးခါလိုကျပွီး သူမရဲ့ ဖိတျခေါျမှုကို ငွငျးပယျလိုကျသညျ။
ထိုခဏတှငျပငျ အနျလငျးက နောငျတရမိသညျ။ ဘယျလိုအပွုအမူမြိုးကို လုပျလိုကျမိတာလဲ..။ မိနျးကလေးတဈယောကျ၏ သူမအခနျးထဲသို့ ဖောျရှစှော ဖိတျခေါျမှုကို သူက အမှနျတကယျ ငွငျးဆိုလိုကျတာလား..။
"အာ..." အနျလငျးက သကျပွငျးခလြိုကျမိသညျ။
"ဘာဖွဈတာလား.." ရုတျတရကျကွီး စိတျဓါတျကသြှားသည့ျ အနျလငျးကို မွငျလိုကျရတော့ စုရှောငျလနျက ထိုမနကျခငျးတှငျ ကငြျးပခဲ့သည့ျ စဈဆေးမှုကို သတိရလိုကျမိသညျ။
ထိုသညျက အနျလငျးအပေါျ သူမ၏ သနားကွငျနာမှုကို တိုးပှားလာစသေညျ။ "ဝငျလာခဲ့ပွီး ငါ့ကို သခြောရှငျးပွလေ.. ငါတတျနိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံး ကွိုးစားပွီး ကူညီမှာပေါ့.."
"အာ.. ဟုတျပွီ.." အနျလငျးက အဖိုးတနျအခှင့ျအရေးကို လကျလှှတျလိုကျမိသဖွင့ျ စိတျဓါတျကနြခြေိနျတှငျ မမြှောျလင့ျဘဲ စုရှောငျလနျက အခှင့ျအရေးတဈရပျ ပေးလာခဲ့ပွနျသညျ။
ဒီတဈကွိမျတှငျတော့ သူက စက်ကန့ျဝကျမြှ စဉျးစားပွီးနောကျ အလငြျအမွနျပဲ လကျခံလိုကျသညျ။ သူမအခနျးထဲ ရောကျပွီးနောကျ စုရှောငျလနျက အနျလငျးကို ရနှေေးကွမျးဖွင့ျ ဧည့ျခံသညျ။
အနျလငျးက လကျဖကျခွောကျအမညျကို မသိပမေဲ့လညျး ထိုရနံ့က သူ့အား အတောျလေး သကျတောင့ျသကျသာ ဖွဈစသေညျ။ သူတို့နှဈယောကျက စားပှဲ၏ တဈဖကျတဈခကြျတှငျ ထိုငျလိုကျပွီး ရနှေေးကွမျးသောကျကာ စကားစမွညျ ပွောကွသညျ။
"ကောငျးပွီ.. နင့ျရဲ့ အရေးကွီးကိစ်စဆိုတာကို အခုပွောလို့ရပွီ.." စုရှောငျလနျက သူမ၏ ကြော့မော့သော ကိုယျနဟေနျဖွင့ျ ရနှေေးကွမျးပနျးကနျလုံးကို ယူကာ ပတ်တမွားရောငျနှုတျခမျးလေးနှင့ျ ထိကပျပွီး တဈငုံယူလိုကျသညျ။
"အာ... အာာ.." အနျလငျးက စုရှောငျလနျကို ကွည့ျပွီးနောကျ လေးလေးနကျနကျဖွင့ျ ခေါငျးညိတျပွလိုကျသညျ။
နမေထိ ထိုငျမထိသည့ျ အနအေထားက စုရှောငျလနျအား ပိုလို့ အာရုံစိုကျမိစသေညျ။
"ငါ့မှာ အဓိက အတားအဆီး တဈခုရှိနတေယျ.."
စုရှောငျလနျက ခေါငျးညိတျပွလိုကျပွီး ဆကျပွောဆိုသည့ျ အမူအရာ ပွလိုကျသညျ။
"ပွူနာက... ငါက ဘယျလိုကငြ့ျကွံရမယျဆိုတာကို မသိတာပဲ.. နငျငါ့ကို သငျပေးနိုငျမလား.."
"ဖူးးး" စုရှောငျလနျက ရနှေေးသီးသှားသဖွင့ျ အနျလငျး၏ မကြျနှာပေါျသို့ ထှေးထုတျမိလကြျသား ဖွဈသှားသညျ။